सावधान ! तपाइ कतै जाडोमा मर्निङ वाक जानु हुदैँ त छैन ? विराट मेडिकल कलेजमा कार्यरत डा. मनिष देवकाे यस्ताे सुझाव - Purbeli News
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष १६, २०७६ समय: ११:४९:३७
इटहरी । कसरत कसरी गर्ने तथा कुन विधिबाट गर्दा स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ भन्ने मा धेरैलाई अन्योल हुन सक्छ । धेरैले शारीरिमा बल पर्नुलाई कसरतका रूपमा लिने गरेका छन् । के तपाइ हामीले दैनिक गरेको शारीरिक व्यायाम वा कसरत ठिक छ त ? स्वास्थ्य बन्न गरेको व्यायामले रोग त निम्त्याकाे छैन । जाडोमा कसरत गर्नु कति फाइदा जनक हुन्छ ? त्यस्तै जिज्ञासा र समस्याको समाधान गर्न पूर्वेली न्यूजले विराट मेडिकल कलेजमा कार्यरत फिजियाे थेरापी विशेषज्ञ डा. मनिष देव सँगको कुराकानी बाट यो सामाग्री निमार्ण गरेको छ ।
फिजियाे थेरापी विशेष गरी ढाड दुख्ने, नासा सम्बन्धी समस्या भएका, जोर्नी दुख्ने, मोटो भएका तथा शाशीरीक तथा मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त हुन चाहनेहरूले गर्दछन् । व्यायाम बसैले गर्नु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले राम्रो नै मानिन्छ । कसरत गर्दा ब्लड प्रेसर, काेल्डस्टाेर, सुगर रोगको समस्याको समाधान हुने गर्दछ । त्यसै गरी मानसिक तथा यौन स्वास्थ्य समेत सबल हुने गर्दछ । त्यस्तै कसरत गर्दा सकारात्मक साेचकाे विकास हुने भएकाले धूम्रपान जस्ता कुलतबाट छुट्ने र मानिस छिटै सामाजिक रूपमा सक्रिय बन्ने छ ।
जाडोमा कसरत गर्नु स्वास्थ्यलाई कति फाइदा ?
जाडो महिनामा कसरत गर्नु स्वास्थ्यकाे लागि त्यति फाइदा जनक मानिदैन् । जाडोमा चिसो अत्याधिक हुने भएकाले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । जाडो मौसममा मर्निङ वाक जानु त स्वास्थ्यका हिसाबले खतरा नै मानिन्छ । चिसोले मुटु सँगै रहेका नसाहरू कडा भएर रक्त प्रवाह कम हुन्छ जुन स्वास्थ्यका लागि खतरनाक हुन सक्छ । त्यसैले घाम लागे पछि अथवा न्यानो मौसममा कसरत गर्नु राम्रो मानिन्छ । चिसो मौसम कसरत गर्नु पर्ने भए शरिरकाे तापक्रमलाइ मौसमको अनुकूल बनाएर मात्र गर्नु पर्ने हुन्छ । यी लगायत फिजियाे थेरापीले स्वास्थ्यमा हुने फाइदाका विषयमा थप जानकारी लिन पूरा भिडियाे हेर्नुहाेस् ।